ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀၁၂ « Chin Refugee Committee Delhi
« CRC Monthly News (January 2011)
Posted by crcnewdelhi on February 8, 2012
CRC၏ လစဉ်ပေးဝေလျှက်ရှိသော Humanitarian အစီအစဉ်ကိုဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက်၂ဝ၁၂CRC ရုံးခန်းတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။အဆိုပါအစီအစဉ်သို့တတ်ရောက်လာသောမျိုးနွယ်စုအသီးသီးမှခေါင်းဆောင်များသည်ဆန်အိတ်ကိုယ်စီဖြင့်CRCရုံးမှမိမိတို့ရပ်ကွက်အသီးသီးပြန်သွားကြကြောင်းသတင်းရ
NewDelhi ရောက်ချင်းဒုက္ခသည် မျိုးနွယ်စု အသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင် ၄၅ ဦးသည် DCCF ၏ဦးဆောင်မှု ဖြင့်၂ဝ၊၁၊၂ဝ၁၂ ရက်နေ့တွင်ဇိုဖယ် အသင်းတော် ဘုရား ကျောင်း၌အစည်းအဝေးတစ်ခု ကျင်းပကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ထိုအစည်းအဝေးပွဲတွင် ‘‘New Delh ရောက် ဒုက္ခသည် များ Resettlement တနေ့ပြီးတနေ့ နည်းပါးလာသည်ကို မည်သို့ ဖြေရှင်းရန်’’စသည်တို့ကိုအ ဓိက ဆွေးနွေးကြသည် ။ထို့နောက် ဆန္ဒပြပွဲတခု ဆင်နွဲနိုင်ရန် အတွက်အသင်းတော်အသီးသီးမှ ဓမ္မ ဆရကြီး များပူးပေါင်း၍ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု တည်ထောင်ရန် ပမာဏ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် ၂၄၊၁၊၂ဝ၁၂ တွင် CHRO ရုံး၌ ဓမ္မဆရာကြီးများ ပြန်လည်တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပ၍ အဆိုပါ အစည်းအဝေးမှ ရ၊၂၊၂ဝ၁၂ တွင် တောင့်တင်းခိုင်မာကျစ်လစ်သော ဓမ္မဆရာအသင်းတစ်ခု ထူတောင်ရန် သဘော်တူဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်
ယခုနှစ် ၆၄နှစ်မြောက်ချင်း အမျိုးသား နေ့ပတ်သတ်၍ အမျိုးမျိုးသော အထင် အမြင် ကွဲပြားမှု ရှိကြောင်း အရပ်စကားအရ သိရှိရ ပါ သည်။ ကော် မြူနီတီများ၏ အဆိုအရတွင်၆၃ နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ သော ပြ သနာ ဖြေ ရှင်းသည့် ကိစ္စနှင့့််ပတ်သက်၍သော လည်းကောင်း၊ရန်ပုံငွေကောက်ခံရေး နှင့်သော် လည်းကောင်းသဘော်ထား အမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ ဖလမ်း ယူနီယံမှယ္ခုနှစ် ၆၄ နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုး သားနေ့တွင် ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခြင်း ၊ရိုးရာ အက များဖြင့် ပါဝင်ခြင်း ၊မပြုရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချထား ကြောင်း နှင့်ယ္ခုနှစ် ချင်းအမျိုးသားနေ့ဖြစ်မြောက်ရး ကော်မီတီ ဥက္ကဌ သို့လိပ်မူ၍ တရားဝင်စာပို့ပြီး ဖြစ် ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
၃ဝ-၃၁-၂ဝ၁၂ ဇန္ဒဝါရီ၂ ရက်တိုင် Ashok Hotel New Delhi တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မဲံ့ Eastand southEastAsia ကွန်ဖရင့်သို့တတ်ရောက်မည့်မြန် မာနိုင်ငံမှ ပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့် လူအဖွဲ့ အ စည်းမှ ခေါင်းဆောင်များသည် အန္ဒိယမြို့တော် New Delhiသို့ရေက်ခဲ့ကြသည်။အဆိုပါကွန်ဖရစ်သို့ မြန်မာနှိင်ငံမှချင်းအမျိုးသားပါတီ၊ကြံခံဖွဲ့ပါတီ၊တစညုပါတီ၊ရှမ်းအမျီုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊အင်းအမျီုးသားပါတီ၊ဝပါတီနှင့်DCP မြန်မာတို့မှပါတီခေါင်း ဆောင်များအသီးသီးရောက်ရှိလာကြသည်။ပေါင်းကူးပါမြန်မာမှနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီကျော်သူ တတ်ရောက်လာသလို၊CNP ပါတီမှ လည်းပါတီ ဥက္ကဌ ပူးဇိုကမ် နှင့်အတူပါတီအထွေ ထွေအတွင်းရေးမှုးဆလိုင်းငှယ်ပီး (ngeihpi) တို့ တတ်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ CNP ပါတီ အထွေထွေအ တွင်းေ၇းမှုး (၁)ဆလိုင်း ငှယ်ပီး သည်၂၉၊၁၂၀၁၂ တနင်္ဂနွေတွင် DBCF ဘုရားကျောင်းသို့ ဘုရား ဝတ်ပြုပြီး CRC မှဥက္ကဌ Coordinator တို့နှင့်တွေ့ ဆုံပြီးဆလမ်းယူနီယံမှ သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးများ နှင့်ဆက်လက် တွေ့ဆုံကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
NewDelhi ရှိမတူမျိုး နွယ်စု၏၂ဝ၁၂ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ရွေးကောက်ပွဲကို ဇန္နဝါရီ လ၂၆ ရက် /၂၀၁၂တွင်DMCFဘုရားကျောင်းတွင်ကျင်းပ ပြီးစီးပါကြောင်း/အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲမှ အောက် ပါ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအား ရွေးကောက်တင်မြောက်ကြ ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
ဥက္ကဌ – Tui Dim – 9650623341
အတွင်းရေးမှူး- Aung Myint -9891545564
ဘဏ္ဍထိန်း – Pu Lavoi -9311125035
ဇိုမီး မျိုးနွယ်စု၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ရွေးကောက်ပွဲကို ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက်၂၀၁၂ တွင် Budella ရပ်ကွက်ရှိဇိုမီးရုံးခန်မတွင်အောင် မြင်စွာ ကျင်းပပြီး စီးကြောင်း အောက်ပါအတိုင် ဗဟိုအ လုပ်အမှုဆောင် အသစ်များ ရွေးကောက်တင် မြောက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
ဥက္ကဌ- Thang Khaw Mang -9650620963
ဘဏ္ဍထိန်း- Khoi Sian Pau – 8527533479
ခူမီး မျိုးနွယ်စု ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော ကေဒီအို၏၂၀၁၂ ခုနှစ်အလုပ်အမှုဆောင် ကော် မတီ ရွေးကောက်ပွဲကို ဇန္နဝါရီလ၂၂ ရက်တွင် အောင်မင်စွာ ကျင်းပကြပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဗဟိုအလုပ်အမှူဆောင် ရွေးချယ်တင်မြောက် ကြပါသည်။
(၁) ဥက္ကဌ Aisawh Theingri 9654433135
(၂) အတွင်းရေးမှူး Luke Aung David ph- 9213503497
(၃) ဘဏ္ဍထိန်း- Pastor L.Hengri Zarte
လူတိုင်းပညာသင်အရွယ်တွင် ပညာကို သင် ကြားရန် လွန်အရေးကြီးပါသည်။ဗမာစကားပုံ တွင်“ပညာလိုအိုသည်မရှိ”ဆိုစကားရှိသော် လည်းလက်တွေ့တွင်မှု အလွန်ခက်ခဲကြောင်း တွေ့ရပေမည်။အသက်၃၀ကျော်တွင်၁၀တန်း ပြန်သင်ရမည်ဆိုလျှင်မည်သူမှသင်နှိင်မည်မ ဟုတ်ပေ။”လသာတုန်းဗိုင်းငင်”ဆိုသလိုငယ် ရွယ်စဉ်စာသင်ရန်လိုအပ်သည်။အဘယ် ကြောင့်စာသင်ရမလဲဟုတချို့မေးစရာရှိပေ မည်။မှန်သည်။အချိန်ကုန်၊ငွေကုန၊်အပင်ပန်းခံ၍ စာသင်မဲ့အစား အရွယ်ကောင်းတုန်းစီးပွါးရှာ သော် သာ၍ကောင်းသည်ဟု ထင်သူလည်း ရှိချင်ရှိ မှာပါ။သို့သောစီးပွားရှာရာတွင လွယ်ကူစွာ နှင့် အောင်မြင်မှုရရှိရန်ပညာသည်မသင်မဖြစ်လူတိုင်းသင်ရပေလိမ့်မည်။’’အလိမ္မာစာမှာရှိ”ဟူသောဆိုရိုးစကား နှင့်’’ပညာရဲရင့်ပွဲလယ်တင့်’’ ဟူသောဆို ရိုးစကားအတိုင်း မိမိတို့`၏အိမ်ထောင်ကြီး ပွားရန် နှင့် စီးပွားရေးရှာရာတွင်ပညာရှိနှင့် ပညာ မရှိသူ တို့သည်လွန်စွာ ကွာဟမှုရှိ ကြောင်း တွေ့ရှိရ ပါ သည်။သို့သော်ပညာရရှိရန် စာသင်ကြားတတ် မြောက်သော်လည်း ပညာမရှိသူမြောက် များစွာ ရှိနေကြောင်းလည်း သတိမမေ့ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် ဒေလီရောက်ချင်းဒုက္ခသည်များ တွင်စာသင်သော်လည်း မိမိတို့မိသားစုနှင့်မျိုး နွယ်စုအ တွက် လုံးဝအသုံးပြု၍ မရသော စာ တတ်တော် တော်များများရှိကြောင်းသတိပြုကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ဆိုလိုသည်မှာ စာမတတ်သော်လည်း လူမျိုးနှင့် ဘာသာရေးအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော သူရှိ သလိုစာတတ်သော်လည်း လုံးဝ အသုံးပြုလို့မရ သော ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ရှိပေသည်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ၊ အင်္ဂလိပ် စကားတတ်ရုံဖြင့်မာနကြီး၍ မိမိဘာသာ မိမိဝါ ကြွားသူတော်တော်များများတွေ့ရှိ၍ ထိုသူများ သည်’’ပညာရှိ’’ ဟုမှတ်ယူကြသည်ကို ဝမ်းနည်း မိ ပါသည်။ စာတတ်သည်ဆိုသည်မှာ ပညာရှင် တ ဦးဖြစ်လာရန် သော့ချောင်းကိုင်သူအဆင့်သာ ရောက်ရှိပါသည်။ပညာရှိတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ရန် သော့ချောင်းကိုင်ထားရနိုင်သူ ဖြစ်သော်လည်း ထိုသော့ကို အသုံးမပြုချင်၊ မပြုတတ်ဖြစ်ပါမူ အ ချဉ်းအနှီးသက်သက်ဖြစ် နေပါလိမ်မည် ။ထို့ ကြောင့်အင်္ဂလိမ်စာ၊အင်္ဂလိမ်စကားသို့မဟုတ်ဘာသာကြီးစာပေနှင့်စကားကိုတတ် မြောက်တိုင်း မိမိကိုယ်ကိုပညာရှိဟူ၍ မှတ်ယူခြင်းမပြုရန်လိုအပ် ပေ သည်။ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသက်ရှင်နေတိုင်သ ရွေ့သင်စရာဟူ၍လူ့အသက်ကုန်နိူင်ပေမည်မ ဟုတ်ပါ။
ယနေ့တွင် လူတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်စီပြန် လည် စမ်း စစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တော်သည်စာတတ် လားသို့မဟုတ် ပညာရှိလားဟူ၍ မိမိကိုယ်ကို မှားယွင်းစွာ ထင်မှတ်မာန ကြီးတိုင်းအရာ ရောက် မည်မဟုတ်။ လူဟူမည်သည်မှာ သင် လေလေမိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချလေလေ သာဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်ယံ၌ ပျံဝဲနေသောစွန်သည်မည်သို့မျှ မာ နကြီးရန်မရှိ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထို သို့ပျဲံနိူင်ရန်မြေ ပြင်မှအပ်ချဉ်ကြီး ဖြင့်ထိန်း ကွယ် ထား၍ဖြစ်သည်။ ယနေ့သင်ရောက်ရှိသောနေရာ၊ ရောက်ရှိသောဘဝသည် စာတတ်အဆင့် လား ပညာ ရှိအဆင့်လား? မိမိဘာသာသိရပေမည်။ မည်သူ့ဆိုစေ ချင်းတို့၏ အမျိုးသားရေးအတွက် ယန့သင်ရောက်ရှိသောဘဝမှ အလုပ်အကြွေး ပြု ရန်လက် သင့်လူမျိုးမှ ကမ်းကြိုလျှက်ပါ။
CRCနှင့်မျိုးနွယ်စုအသီးသီးမှခေါင်းဆောင်တို့ သည်၂၈၊၁၊၂ဝ၁၂ သောကြာညနေ၃းဝဝနာရီ တွင် SLIC ရုံး၌အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပ ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် နယူး ဒေလီ ရောက်ဒုက္ခသည်များ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာဖြေရှင်းရာတွင်လွယ်ကူစွာ ဖြေရှင်းနိူင်ရန် အမျုိုးမျုိုးဆွေးနွေးထားကြပါသည်။အဆိုပါအစည်းအဝေးမှယနေ့မှစ၍ရဲနှင့်သက်ဆိုင်သော အမှုများ နှင့် ဥပဒေကိုင်းဆိုင်ရာအမှု များကို SLIC မှလွယ် ကူမြန်ဆန်စွာ ဖြေရှင်းနိူင်ရန် မျိုးနွယ်စု အသီးသီး၌ ကြုံတွေ့သော ပြဿနာများကိုအချိန်မှီသတင်းပေး ပို့တိုင်ကြားကြရန်ဟု SLIC ဘက်မှ အကူအညီ တောင်း သွားပါသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးမျိုးသော ပြဿနာကြုံတွေ့ပါက အချိန်မှီ SLIC သို့တိုင်ကြား မှု ပြုလုပ်ကြရန် အားလုံးကို ဤစာဆောင်အားဖြင့် နူိုးဆော်အပ်ပါ သည်။
ယခုနှစ် ဇန္ဒဝါရီလမှစ၍ CRC အသုံးပြု သူချင်းဒုက္ခသည် ဦးရေသည် တနေ့ထက်တစ် နေ့ များပြားလာသည် ဟုCRC မှတ်တမ်းအရာ ရှိမှ တ ဆင့် သိရှိရပါသည်။ ဇန္ဒဝါရီလ အတွင်း CRC သို့ သွား ရောက်အမျိုးမျိုး အကူအညီ တောင်း သူဦး ရေမှာ စုစုပေါင်း (၁၉၃) ဦးရှိ သည်။ ဇန္ဒဝါရီလ (၂၄) တစ်ရက် တည်းတွင် CRC သို့ချင်းဒုက္ခသည် (၂၄) ဦးသွား ရောက်ခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းအရ သိရှိရသည်။
နယ်သာလန်(ဟော်လန်)နိူင်ငံမှ သတင်း ထောက် John Stokef သည်၂၁၊၁၊၂ဝ၁၂ တွင် CRC ရုံးသို့လာရာက်၍ New Delhi ရောက်ချင်းဒု က္ခသည်များ၏ အခြေအနေအသေးစိတ်ကို စုံစမ်း မေးမြန်းသွားပါသည်။ New Delhi UNHCR မှချင်း ဒုက္ခသည်များကို မည်သို့မည်ပုံကူညီခံ့ပုံနှင့် လက် ရှိအခြအနေများကို CRC မှတာဝန်ရှိသူများအား တင်ပြခဲ့ပါသည်။ John Stokef မှ နယ်သညလန် အစိုးရသို့ချင်းဒုက္ခသည်များ၏ အရေးကိုတင်ပြပေး မည်ဟု ဂတိပြုသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
CRC မှလစဉ်ပုံမှန်ထုတ်ဝေ လျက်ရှိသော လစဉ်ထုတ် စာစောင်သို့ ဆောင် ပါး များ ၊သတင်းများ ပေးပို့ ကြရန်အားလုံးကို ဖိတ် ခေါ် ပါ သည်။မြန်မာလိုမ ရေးတတ်ပါက မိမိတတ်မြောက် သော မိခင်ဘာသာစကားဖြင့် အောက်ပါဖုံးနံပါတ် နှင့် အီးမဲလ်လိပ်စာ သို့ပေး ပို့နိုင်ပါသည်။
ph – ၉၈၁၀၃၂၇၂၄၄
ခိုင်ဘွဲ့ – ၈၅၂၇၀၄၉၇၇၄
သင့်လုပ်ငန်း ၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို CRC လစဉ် ထုတ် စာစောင်သို့ ကြော်ငြာ လိုပါက ကြော်ငြာနိူင် သည်။
This entry was posted on February 8, 2012 at 5:46 am	and is filed under Other Topics. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.
One Response to “ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀၁၂”